Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Ady hevitra mifono adilahy politika | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Ady hevitra mifono adilahy politika
Tsy misy fanafenana ny isan’ny marary voan’ny aretina Covid-19 noho ny fiampitapitan’ilay otrik’aretina coronavirus. Mitombo isan’andro ary manaitra ny fihanak’ilay aretina. Ny fanambarana isan’andro ireo isa isan-karazany momba ity areti-mifindra ity dia ampy andinihan’ny tsirairay ny fandroso na ny fihemoran’ilay Covid-19. Ny filoham-pirenena moa tsy nisalasala nanambara fa voafehy ilay aretina, izany hoe mbola vitan’ireo tompon’andraikitra ny mitsongo dia azy ka maharaka ny fiampitapitany ahafahana mifehy ny fiparitahany tsy afa-mihoatra izay tokony ho izy raha avela tsy misy mpiambina ka hahafahany hiridana toy ny soavaly tapa-kofehy. Tsy andrankandrana na antsapaka anie no fomba isafidianana izay anaovana fitilina, fa araka izay fitsongoan-dia ny fihitarany izay, ka izay itoeran’ny ahiahy no tsy anaovana izany ary hita porofo noho ny valin’ny fitiliana fa araka tsara ny dian’ilay otrik’aretina. Marina fa mety ho tsy ampy ny isan’ny fitilina efaina, akory atao tsy maintsy tsitsiana ireo fitaovana fitiliana izay vitsy ihany raha mihoatra amin’izay heverina ho manara-penitra. Mbola miverina ihany ilay fitenenana hoe « mason-tsokina izay kely ananana no ahiratra ». Tsy misy moa afaka hilaza na misy na tsia ny marary mitaiza Covid-19 any ambadibadika any.
Ny toe-draharaha iaraha-mahita aloha dia ny fisondrotry ny isan’ny marary. Azo iadian-kevitra avy amin’izay tarehimarika izay ny momba ny fifehezana na tsia ilay aretina. Nitarika fanakianana mahery vaika moa ny fanambaran’ny filoham-pirenena hoe voafehy ilay aretina. Mety tsy hitovy ny hevitra eo amin’ny famintinana ny zava-misy. Mampisavorovoro ny saim-bahoaka anefa ilay fomba fanakianana, tsy vitan’ny fifanakalozana hevitra na fampiadian-kevitra tsotra fa lasa fanaovana adilahy politika.
Ny filohan’ny Repoblika moa dia nanafatra mazava, fa na voafehy aza ny fihanak’ilay aretina dia mbola tsy vita ny ady amin’ilay otrik’aretina noho izy tsy ifanafenana fa mbola miampitapita isan’andro. Na tsy mitovy fijery aza izay manohitra ny fijerin’ny filoha izay, dia tsy tokony hijanona amin’izay izy ireo fa tokony hanentana sy hamporisika mafy ny mponina hanaja ny fepetra sy ireo fihetsika fiarovan-tena izay hany ahafahana miaro tena sady mitsinjo ny mpiray monina rehetra. Any ivelany any, toy ny any Sina sy Pôrtigaly, izay efa samy nihevitra ho nandresy ny coronavirus aza dia niverina indray tamin’ny fihibohana fa nisampotona tsy nampoizina ilay otrik’aretina dia maromaro sahady ireo olona mararin’ny Covid-19. Noho izany, aleo samy mitandrina daholo sao mirongatra izay tsy izy ity fahavalo tsy taza-maso ity.